केपी शर्मा ओली | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या, अचानक अस्पताल भर्ना
काठमाडौं, १४ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनलाई राति समस्या भएपछि मनमोहन कार्डियोलोजी अस्पताल महाराजगञ्जमाभर्ना गरिएको
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यद्धारा एक महिनाको तलब उपब्लध गराउने घोषणा
काठमाडौं, १० चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय सदस्यहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमणविरूद्द नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेष कोषमा एक महिनाको तलब बराबर सहयोग रकम घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
सीमा नाका बन्द नहुने
काठमाडौं, ७ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा नाकामा कडाई गरी आवागमनमा स्वास्थ्य सुरक्षासहितको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । उनले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सीमा नाकाबाट आवागमन गर्नेहरुको
१० चैत्रबाट लामो दुरीका यात्रुवाहक बस चल्न निषेध, ९ देखि यात्रुवाहक विमान नेपाल भित्रन नदिने
काठमाडौं, ७ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र ९ देखि नेपाल भित्रने यात्रुवाहक विमानलाई निषेध गरिने बताएका छन् । उनले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन्
काठमाडौँ, ७ चैत । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट उनले साँझ ६ बजे सम्बोधन
ओली र दाहालबीच भेटवार्ता, के कुरा भयो ?
काठमाडौं, ७ चैत्र । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको अध्यक्षद्धयबीचको भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे कुरा
मेरो आँखैले देखेको ओलीको इच्छाशक्ति
जे पी गुप्ता: मैले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई फरक–फरक अवस्थामा दूईपटक दिल्लीमा भेटे । पहिलोचोटी अपोलो असपतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न जानुभएको थियो । प्रत्यारोपणपछिको पहिलो स्वास्थ्य परिक्षण तालिकाअनुसार दिल्ली पुग्दा
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड
काठमाडौं, ४ चैत । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सामान्य मानिस जसरी पूर्णरूपमा सक्रिय हुन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्नेछ’, प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सकसमेत रहेकी डा. दिव्या सिंहले २७ फागुनमा शिक्षण अस्पताल परिसरमा भनेकी थिइन्,
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि गत शुक्रबार बेलुकी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार फर्किनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँका सल्लाहकार समूहले चौबिस घण्टा पनि आराम गर्न दिएनन् । डिस्चार्ज भएको भोलिपल्ट बेलुका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार
प्रधानमन्त्री ओली आराम नगरी सिंहदरबार पुगेपछि चिकित्सक असन्तुष्ट
काठमाडौं, २ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मृगौला प्रत्यारोपणपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको तीन दिनमात्र पुगेको थियो । उनलाई चिकित्सकले सावधानी अपनाउन र संक्रमणबाट जोगिन मानिसहरुबाट टाढा रहन सुझाव दिएका
काठमाडौं, २ चैत्र । प्रधानमन्त्री एवं सार्कका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य मुलुकका राष्ट्राध्याक्ष/प्रधानमन्त्रीबीचको साँझ आयोजित भिडियो कन्फरेन्समा